लूका १४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१४ एक चोटि विश्राम-दिनको बेला उहाँ फरिसीहरूका धर्मगुरुहरूमध्ये एक जनाको घरमा खाना खान जानुभएको थियो र तिनीहरूले उहाँलाई नियालिरहेका थिए। २ अनि हेर, जलोदर भएको एक जना मानिस उहाँको अगाडि थियो। ३ त्यसैले येशूले व्यवस्थामा पोख्त मानिसहरू र फरिसीहरूलाई सोध्नुभयो: “विश्राम-दिनमा निको पार्दा नियम उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन?” ४ तर तिनीहरू चूप लागेर बसे। यो देखेर उहाँले त्यस मानिसलाई छोएर निको पार्नुभयो र उसलाई त्यहाँबाट पठाउनुभयो। ५ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूमध्ये कुनचाहिं मानिस यस्तो होला, जसले आफ्नो छोरा वा गोरु विश्राम-दिनको बेला इनारमा खस्यो भने त्यसलाई तुरुन्तै बाहिर निकाल्दैन?” ६ अनि यस विषयमा तिनीहरूले जवाफै दिन सकेनन्‌। ७ तब त्यहाँ आएका निम्तालुहरूले मुख्य-मुख्य आसन रोजेको देखेर उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त बताउनुभयो: ८ “कसैले तिमीलाई विवाह-भोजमा निम्त्याउँदा अगाडि गएर सबैभन्दा मुख्य आसनमा नबस। तिमीलाई निम्तो दिनेले सायद तिमीभन्दा पनि प्रतिष्ठित मानिसलाई त्यहाँ निम्त्याएको हुन सक्छ ९ अनि तिमीहरू दुवैलाई निम्त्याउने मानिस आएर तिमीलाई यसो भन्नेछ: ‘उहाँलाई यो ठाउँ छोडिदिनुहोस्।’ अनि तिमी लाजले भुतुक्क हुँदै सबैभन्दा पछाडि गएर बस्नुपर्नेछ। १० बरु तिमीले निम्तो पाउँदा गएर सबैभन्दा पछाडि बस अनि तिमीलाई निम्तो दिने मानिस आएर तिमीलाई भन्नेछ: ‘मित्र, गएर अगाडि बस्नुहोस्।’ तब त्यहाँ भएका सबै पाहुनाको अगाडि तिम्रो इज्जत हुनेछ। ११ किनकि जसले आफूलाई उचाल्छ, ऊ होच्याइनेछ अनि जसले आफूलाई होच्याउँछ, ऊ उचालिनेछ।” १२ त्यसपछि उहाँले आफूलाई निम्तो दिने मानिसलाई पनि यसो भन्न थाल्नुभयो: “तिमीले दिउँसो वा बेलुकी कसैलाई खान बोलाउँदा आफ्ना साथी, दाजुभाइ, नातेदार वा धनी छिमेकीहरूलाई नबोलाऊ। सायद तिनीहरूले पनि तिमीलाई कुनै बेला खान बोलाउलान्‌ र हिसाबकिताब बराबर हुनेछ। १३ तर तिमीले भोज दिंदा गरिब, अपाङ्ग, लुला-लङ्गडा, अन्धाहरूलाई निम्तो देऊ १४ र तिमी आनन्दित हुनेछौ, किनकि त्यसको साटो तिर्न तिनीहरूसित केही पनि हुँदैन। तर परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरू पुनर्जीवित* हुँदा तिमीले त्यसको इनाम पाउनेछौ।” १५ यो कुरा सुनेर निम्तालुहरूमध्ये एक जनाले उहाँलाई यसो भन्यो: “आनन्दित हो त्यो मानिस, जसले परमेश्वरको राज्यमा भोज खानेछ।” १६ येशूले उसलाई भन्नुभयो: “एक जना मानिसले भव्य रात्रि-भोज दियो र धेरैलाई निम्त्यायो। १७ अनि भोज सुरु हुने बेला भएपछि उसले आफ्नो दासलाई निम्तालुहरूकहाँ यसो भन्न पठायो: ‘आउनुहोस्, सबै कुरा तयार भइसक्यो।’ १८ तर तिनीहरू सबका सबले बहाना बनाउन थाले। पहिलोले उसलाई भन्यो: ‘मैले एउटा खेत किनेकोले त्यो हेर्न जानुछ। त्यसैले माफ गर्नुहोस्, म आउन सक्दिनँ।’ १९ अनि अर्कोले भन्यो: ‘मैले पाँच हल गोरु किनेकोले ती हेर्न जाँदैछु। त्यसैले माफ गर्नुहोस्, म आउन सक्दिनँ।’ २० अर्कोचाहिंले भन्यो: ‘मैले भर्खरै विवाह गरें। त्यसैले म आउन सक्दिनँ।’ २१ तब त्यो दासले फर्केर आफ्नो मालिकलाई सबै कुरा बताइदियो। यो सुनेर घरमालिक क्रोधित भयो र आफ्नो दासलाई भन्यो: ‘तुरुन्तै चौबाटो र सहरका गल्लीहरूमा जाऊ र गरिब, अपाङ्ग, अन्धा र लुला-लङ्गडाहरूलाई यहाँ ल्याऊ!’ २२ केही बेरपछि दासले भन्यो: ‘मालिक, तपाईंले भनेजस्तै गरें, तैपनि अझ ठाउँ बाँकी छ।’ २३ तब मालिकले दासलाई भन्यो: ‘सडक-सडकमा र बार लगाइएका ठाउँहरूमा जाऊ अनि मानिसहरूलाई आउन कर गर, ताकि मेरो घर भरियोस्। २४ म तिमीहरूलाई भन्छु, निम्तालुहरूमध्ये कसैले पनि मेरो भोज चाख्न पाउनेछैन।’ ” २५ तब ठूलो भीड उहाँसँगै यात्रा गर्दै थियो अनि उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई भन्नुभयो: २६ “यदि कोही मकहाँ आउँछ र आफ्नो बुबा, आमा, पत्नी, छोराछोरी, दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई अनि हो, आफैलाई* समेत घृणा गर्दैन भने ऊ मेरो चेला बन्न सक्दैन। २७ जो आफ्नो यातनाको खम्बा* बोकेर मेरो पछि लागिरहँदैन, ऊ मेरो चेला बन्न सक्दैन। २८ उदाहरणका लागि, तिमीहरूमध्ये को यस्तो होला, जसले धरहरा बनाउने विचार गरेपछि, त्यो बनाइसिद्धयाउने खर्च आफूसित छ कि छैन भनी बसेर पहिला हिसाब गर्दैन? २९ उसले जग त हाल्यो तर धरहराचाहिं बनाउन सकेन भने देख्नेहरूले उसको गिल्ला गर्दै ३० यसो भन्न थाल्नेछन्‌: ‘यो मानिसले बनाउन त थाल्यो तर सिद्धयाउन भने सकेन।’ ३१ अथवा अर्को राजासित लडाइँ गर्न अगाडि बढिरहेको कुनचाहिं राजाले आफ्नो दस हजार सिपाही लिएर उसको बीस हजारसित आफू लड्न सक्छु कि सक्दिनँ भनी बसेर पहिला सल्लाह गर्दैन? ३२ यदि लड्न सकिन्न भन्ने लाग्यो भने उसले अर्को राजा टाढै छँदा आफ्ना दूतहरूमार्फत शान्तिको प्रस्ताव पठाउनेछ। ३३ त्यसैगरि, यो कुरा पक्का हो कि तिमीहरूमध्ये जसले आफ्नो जायजेथा त्याग्दैन, ऊ मेरो चेला बन्न सक्दैन। ३४ “नुन अवश्य राम्रो हो। तर नुनको नुनिलोपन हरायो भने त्यसलाई फेरि केले स्वादिलो बनाउने? ३५ त्यो न माटोमा हाल्न न त मलमा मिसाउन नै काम लाग्छ। मानिसहरूले त्यसलाई बाहिर फाल्नेछन्‌। जसको सुन्ने कान छ, त्यसले सुनोस्।”
^ लूका १४:१४ * वा, “पुनरुत्थान।”
^ लूका १४:२६ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ लूका १४:२७ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।